धुर्मुस र सुन्तली त भगवान हुन ! अष्ट्रेलियाबाट धर्मुसले गरे यस्तो घोषणा – Todays Nepal
धुर्मुस र सुन्तली त भगवान हुन ! अष्ट्रेलियाबाट धर्मुसले गरे यस्तो घोषणा
By Todays Nepal | नेपाल आज	 Last updated Dec 19, 2017
एकिकृत नमूना वस्ती निर्माणको लागि व्यापक चर्चा कमाएका कलाकारद्वय सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ अष्ट्रेलिया पुगेका छन्। अष्ट्रेलियका विभिन्न शहरमा आयोजना भएको ‘धुर्मुस् सुन्तली साँझ’ का लागि उनीहरु हालै अष्ट्रेलिया पुगेका हुन्। अष्ट्रेलियामा करिब नेपाली ४० लाख रुपैयाँ उठेको धुर्मुस्ले फेसबुक लाईभ मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
अष्ट्रेलियाबाट नेपाल अाउनु अगाडि धुर्मुसले फेसबुकमा लाईभ अाउदै विभिन्न घोषणाहरु गरेका छन् । हेर्नुस् भिडियो
चिसोले कठयाङ्ग्रिएर सप्तरीमा एक वृद्धाको मृत्यु
सप्तरी । मुलुकभर अत्यधिक चिसो बढेको अवस्थामा सप्तरीमा कठयाङ्ग्रिएर एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर १ की ९६ वर्षीया रिजयादेवी राय रहेको परिवारजनले बताएका छन् । रायको आफ्नै घरमा कठयाङ्ग्रिएर मृत्यु भएको उनका पति कमल रायले जानकारी दिए ।
अर्कातिर अत्यधिक चिसोका कारण बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरु बढी प्रभावित भएका छन् । चिसोकाकारण बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरु धमाधम बिरामी पर्न थालेपछि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको अस्पतालले जनाएको छ ।
रवि लामिछानेले गरे तीन करोडले सलाम ठोक्ने यस्तो घोषणा
नाङ्गै भएर बिरामीको उपचार गर्ने अनौठो महिला डाक्टर
एउटा गाडी मर्मतमा चार लाख ! यसरी लुटे देशको ढुकुटी …
काठमाडौंमा ट्याक्सी भन्दा हवाइजहाज चढ्नु सस्तो भयो !
विदेशबाट फर्किएपछि सम्पत्ति गायब ! जब मालपोत कार्यलयले मगरलाई फोन गरे…
सडक सफाईमा ट्राफिक प्रहरी आफैँ यसरी जुट्यो
टुडेज नेपाल	2months ago